Waxaa jira waxyaabo badan oo a bad bad bad a oo saabsan WordPress. Way fududahay in la isticmaalo, bilaash ah, laydhiyo, waxaana taageersan beel weyn oo marwalba diyaar u ah inay caawiyaan bilowga hore.
Sidi aad u isticmaashay wakhti dheer isticmaala WordPress, waxaan ku faraxsanahay ugudbinta macaamiishooyin ku dhejinaya mashaariicdayda. Noocyada ugu wanaagsan ee software waxay ii oggolaadeen in thean dhisno xirfad-raadin, si buuxda in shaqeynaya, iyo boggaga internetový prehliadač aan ee dadka isticmaala iyaga oo aan baran codsiga ballaaran.
Marka ay timaado isticmaalka, mid ka mid ah qalabka ugu muhiimsan ee aad u baahan tahay in aad WordPress arsenal aad tahay foomka dhise. Waxay u ogolaaneysaa dhagaystayaashaada inay dhexgalaan astaantaada – waxay noqonayaan qaabka su’aalaha guud, codsiyada taageero, ama jawaab celinta. Foomamka waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa baaritaanno kaa caawinaya inaad fahamto qoto dheer oo aad aragto dhagaystayaashaada.
Inštasta oo kaydka rasmiga ah ee rasmiga ah ee hore loo soo bandhigay fiilooyinka qaab-dhisida, qaar ka uprostred ah blogerov iyo suuqyeyaal ayaa doorbidaya inay ku dhuftaan G Suite – webový prehliadač a webový prehliadač.
Príspevok v tomto článku, Waxaan ku tusi doonaa hababka kala duwan ee isticmaalka Foomamka Google oo leh boggaga WordPress.
2 U dir Foomka Google ee WordPress
Najprv zo všetkých galaxií Google Forms iyadoo la isticmaalayo koontada Google ee sax ah.
Dabcan, šablóna adigoo adeegsanaya waa wakhti badbaadiye ah, gaar ahaan haddii aad horay at ogtahay waxa a is is de deeyeyso in buad is foomkaaga. Načítať ďalšie muujiyaan muuqaalada qaababka Google ah, aynu hore u soconno oo ka bilowno template blank.
Taab ahaan, tafatiraha pre aasaasiga ah waxaa ka mid ah "xulasho badan" nooc su’aal ah. Tani waxay faa’iido u leedahay abuurista foomamka sahanka. Hadaad rabto inaad vosk kale isticmaasho, dhagsii ‘Dhowr xulasho’ liiska hoos udhaca and a u muujisid xulashooyinkaaga.
Xilligan, Spojené štáty americké waxay taageeraan noocyada su’aalaha soo socda si louri ururiyo macluumaad kala duwan.
Si aad vosk na lôžko makluumaad kasta, kaliya guji beerta madhan oo qor. Vosk walba ayaa lagu badbaadin doonaa daruuraha, sidaa daraadeed uma baahna in laga walwalo badbaadinta.
Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa sidebar and aad ugu darto walxo kale oo foomka ah, sida muuqaal, muuqaal, ama qayb gooni ah.
Sida caadiga ah suulka, kaliya weydii macluumaadka aad baahan tahay dadka isticmaala bartilmaameedka. Haddii aad waydiiso su’aalo aad u Farabadan ama noqotaba, dadka isticmaala waxaa laga yaabaa in lagu dhiirrigeliyo inay dhamaystiraan soo gudbintooda.
Ak chcete voskovať, kliknite na tlačidlo Ďalej, Google, Tixraac, Centrum výučby Goo Adoo gujinaya..
U dir Foomka Google ee WordPress
Si aad u hesho koodhka koodhka ee foomkaaga, dhagsii batoonka ‘dir’ badhanka koree ee midig ee tifaftiraha.
Nahlásiť nevhodný obsah Odpovedať qaadato, dashboardkaaga WordPress una fur bogga ama boostada meesha a rab rab in foomka la arko. Uchádzať sa o kód HTML a kód HTML-kaaga.
Xusuusnow, haddii aad ku dhejiso lambarka xargaha adigoo adeegsanaya tifaftiraha muuqaalka, koodhkaagu wuxuu u muuqan doonaa sidii hore. Adeegsiga tifatiraha qoraalka ayaa u Sheegaya WordPress inay ubaahantahay inay marto khad gaar ah sida koodh. Markii la dhammeeyo, dhagsii batoonka „Dulmarka“ si naštudoval haddii koodhku shaqeynayey.
Haddii kale, waxaad si toos ah ugu rogi kartaa tifaftire muuqaal ah si loo eego haddii forom sax ah u muuqdo.
Iska fiirso v mawduuca WordPress uu qeexayo ballaarinta mawduucaaga mawduucaaga. Waxaad ku bedeli carda tan iyada oo la adeegsanayo code ama adigoo ku xiraya mawduuc kale. Mawduucyada qaarkood, aaladda maadada waxay sidoo kale xajistaa ballac buuxa haddii a jo joojinayso widget-yada dhinacyada.
Paleta midabbada, dhinaca kale, waxaa lagu beddeli karaa adigoo gujinaya batoonka „Midabada Palette“ ee tifaftiraha foomamka Google. Hadaad rabto, waad sawiri kartaa sawirro halkii aad u isticmaali lahayd midabyo asal ahaan asal ahaan ah.
Ku darida Foomamka Google iyada oo aqaqa codsanaya ayaa u muuqata mid sahlan oo aan loo baahneyn in la isticmaalo qalabyada, sax?
Haddii hadafkaagu kaliya yahay in lagu dhajiyo Foomamka Google si aad boggaaga WordPress u hesho, jawaabta waa haa. Si kastaba ha ahaatee, wpGForm badanaa wuu ka badan yahay oo kaliya isdhexgalka foomamka. Waxay sidoo kale kuu ogolaaneysaa inaad ku qariso magaca foomka, bedelka badhanka gudbinta, isticmaalka jaahwareerka, iyo wixii la mid ah.
Laakiin ka hora inta kale, xasuuso in wpGForm kaliya ay la shaqeeyaan qaabka hore ee qaababka Google.
Si aad u gasho tan, dhagsii badhanka ‘Caawinta & Jawaab celinta „oo dooro“ Ku noqo foomamka hore. “
Ka dib marka aad ku rakibtid wpGForm, u tag dashboardkaaga WordPress oo guji ‘Google Forms’> „Ku dar Foomka Google ee Cusub.“
Marka ku xigta, ku dhaji xiriirinta foomkaaga garoonka „Foom URL“. Waxaad tan ku heli karta a ado aado tifatiraha foomka Google oo gujinaya ‘Fayl’> “Foom dir.”
Ka dib markaad dhejiso xiriirinta, dhagsii batoonka „Daabac“. Taasi waa! Haddii URL sax ah la galiyay, foomkaagu hadda waa diyaar oo loo adeegsan karo furaha. Tan waxaa lagu marin kara ‘tagitaanka Google’ ‘Foomamka Google’> „Foomamka Google.“
Waxaa haboon v la ogaado v wpGForm yahay plugin leh cur curve waxbarasho. Isticmaalidda goobaha caadiga ah, foomkaagu wuxuu isticmaali doonaa waxyaabaha asaasiga ah ee asaasiga ah marka laga reebo isticmaalka koodh daboolan.
Si aad ogaato wax badan oo ku saabsan waxyaabaha aad same same karto wpGForm, waxaad tixraaci kartaa qaybta talooyinka iyo tabaha loo yaqaan ‘creator’ ‘website-.
Ma ku raacsan tahay in foomamku yahay qayb muhiim ah ee khibradda user WordPress? Haddii ay sidaas tahay, iska hubi boostadan and aad u heshid faa iido dheeraad ah oo ku haboon waxaad isticmaali kartaa.